Xaflada daahfurka Qorshaha Horumarinta Puntland (Revised Puntland Development 2017-2019) ee Magaalada Garowe – Ministry of Planning, Economic Development and International Cooperation
Waxaa maantay oo taariikhdu tahay 31th December 2016 Madaxweyne ku Xigeenka Dawlada Puntland Eng Cabdixakiin Cabdullahi Xaaji Cumar Camay ku daahfuray Xarunta Horumarinta iyo Cilmi Baarista Puntland (PDRC) ee Caasimada Garowe Qorshaha Horumarinta Dowladda Puntland (Revised Puntland Development 2017-19) oo ay diyaarisay Wasaaradda Qorshaynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Puntland.
Qorshaha Puntland (2017-19) (Revised Puntland Development 2017-19) kana soo baxay dibu eegistii lagu sameeyey Qorshii Labaad ee Shanta Sano ee Puntland (2014-2018) wuxuu muujinayaa wajigii ugu dambeeyay ee dadaalada horumarineed ee Dowladda Puntland ee Soomaaliya ay wado.
Qorshahaaan Horumarinta waxaa loo asteeyey kor uqaadista lagu samaynayo dhinaca tayada si loo horumariyo nolosha bulshada reer Puntland iyo sidoo kala wax ka qabashada caqabadaha dhaqan-dhaqaale, siyaasadeed iyo farsamo, iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha si loola soo baxo khayraadka dabiiciga ah ee dalkeenu leeyahay una horseedaya ubadkeena reer Puntland mustaqbal wanaagsan.
Diyaarinta Qorshaha Horumarinta Puntland wuxuu ku dhisanyahay qaabka wadatashiga iyo wadashaqaynta. Qorshahaan waxaa iska leh dowladda Puntland wuxuuna ku salaysan yahay baahida iyo rabitaanka bulshada reer Puntland, waxaana lagu fulin doonaa iyada oo loo marayo wadada iskaashiga Dowladda Puntland iyo dhamaan dhinacyada kale ee ay khuseyso sida qaybaha wada shaqaynta iyo isu duwida (Sector Working Groups, SWGs) qorshaha Horumarinta Puntland ee (2017-19) kaas oo ah qaab dhismeedka horumarka muddada-dhexe ee Puntland.
Qorshahaan wuxuu muujinayaa oo uu ka hadlayaa caqabadaha ka hor imaankara horumarinta waaxyaha kala duwan ee dowladda, waxayna muujineysaa mudnaanaha muhiimka ah, kuna talinaysaa xeelado iyo habab ku dhisan sidii guulo wax ku ool ah looga gaarilahaa himilooyinka horumarinta guud ee Puntland. Puntland waxay sii wadaysaa himilooyinkeeda ku aadan sidii loo hirgalinlahaa wajiga saddexaad ee Qorshaheeda Horumarinta.
Cutubyada kala duwan ee Qorshaha Horumarinta gudahood, waxaa ku jira himilooyin waaweyn oo ah istaraatiijiyadii aan ku gaarilahayn maamul-wanaagga; xoojinta ammaanka iyo xasiloonida, horumarinta dhaqaalaha iyo suuqa xorta ah; hagaajinta tayada waxbarashada iyo daryeelka caafimaadka, casriyeynta kaabayaasha dhaqaalaha ee muhiimka ah; kor u qaadida xuquuqda aadanaha iyo sinnaanta jinsiga iyo horumarinta dimuqraadiyadda iyo baahinteeda.